Pejy fandokoana mandalas ho an'ny olon-dehibe maimaim-poana
Motif an'ny tsirairay mandalas
Ny teny mandala dia avy amin'ny sanskrit ary midika hoe boribory. Mandalas dia sary izay misy maodetrika na asymmetrika lamina ary maneho ny microcosm an'izao rehetra izao. Ireo lamina dia ampifanarahana hatrany amin'ny teboka afovoany ary mazàna boribory na toradroa.
Mandalas amin'ny kanto sy ny natiora
Raha mijery ny natiora ianao dia afaka mahita mandala na aiza na aiza. Ohatra amin'ny voninkazo, peratra hazo, felam-panala, amin'ny alàlan'ny vatokely izay hatsipy ao anaty rano sy faribolana ...
Mandalas ho an'ny olon-dehibe - © Tina / Adobe Stock
Amin'ny Buddhism sy Hindoisma, mandala dia manana dikany ara-pinoana. Tamin'ny alàlan'ny bodisma dia niparitaka ho zava-pisaintsainana ny mandala. Ary ankehitriny dia fantatra manerantany izy ireo. Mandalas dia azo vita amin'ny akora voajanahary na hafafy amin'ny fasika. Eto amin'ity firenena ity, malaza be ny mandala amin'ny fandokoana.
Fa maninona mandala loko?
Mandalas dia tsy fanampiana fotsiny hisaintsainana, fa fialamboly mahafinaritra ho an'ny tanora sy ny lehibe koa. Misy mandala amin'ny ambaratongam-pahasarotana samihafa. Manomboka amin'ny tsotra ka hatramin'ny fitakiana. Mandalas manampy hiditra eto ary ankehitriny. Mifantoka tanteraka amin'izay ataonao. Mifantoka amin'ny fandokoana ianao, tsy vitan'ny hoe mampiroborobo ny fifantohana izany fa mampitony ny eritreritrao koa.
Ny loko izay ampidirina amin'ny lamina dia mandamina ny korontana ary mitondra firindrana amin'ny sary. Raha mitondra filaminana amin'ny takelaka ianao dia mitondra filaminana bebe kokoa ao aminao ihany koa. Manomboka amin'ny dia mankany aminao ianao ary manadino ny fikoropahana amin'ny fiainana andavanandro. Ampirisihina ny fahaiza-mamorona ary mandrisika ny eritreritrao manokana. Afaka miala sasatra tsara kokoa ianao eo amin'ny zoro mangina, miaraka amina mozika mangina any ambadika na kaopy dite. Ny fanindriana ny sary dia manokatra ny pejy topy mandala:
Mandala biby ho an'ny olon-dehibe
Voninkazo sy voninkazo
Ny tsindry eo amin'ny sary dia manokatra ny pejy miaraka amin'ny motif mandala voafantina:
Hazo mandala misy voninkazo
Fon'ny hazo mandala modely
Mandala modely ho an'ny olon-dehibe
Olondehibe voninkazo Mandala
Mandala ho an'ny olon-dehibe
Loko amin'ny mandala
Mandalas ho an'ny olon-dehibe - felany sy voninkazo
Pejy fandokoana biby mandala hippogryph | Mandala biby